एक मतदाताको गुनासो - मेरो मतको दुरुपयोग भयो !
प्रीय नेताज्यू, म एकजना मतदाता हुँ । मैले गएको निर्वाचनमा तपाईं अहिले झगडा गरिरहनुभएकै पार्टी मध्य एकको चुनाव चिन्हमा मतदान गरेको हुँ । अहिले तपाईं जुन जगमा टेकेर झगडा गरिरहनुभएको छ नी, हो त्यो मै जस्ता मतदाताको मतका कारण तपाईंलाई यो अवसर मिलेको हो भन्ने नबिर्सनुस् । ‘अति गर्‍यो भने खती हुन्छ’ भन्ने नेपाली उखान सुन्नुभएकै होला । अब यो भन्दा बढी तपाईंहरुको नौटंकी हेर्ने मन मलाई पनि छैन र सायद म जस्तै अरु मतदातालाई पनि नहोला ।
यतिबेला देशमा कोरोना भाइरसको त्रास छ । म जस्तै तपाईंलाई मत दिएर समृद्ध नेपाल हेर्ने रहर बोकेका मतदाता यतिबेला रुँदैछन् । ती तपाईंकै निर्वाचन क्षेत्र वा टोलकै हुन् र तीनलाई हेर्ने अभिभावक तपाईं नै हो । विश्वभर फैलिएको यो महामारीले २ लाख १७ हजार मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । यसमा ५० भन्दा बढी नेपाली छन् । तर ती नेपालीको ज्यान स्वदेशमा नभै विदेशमा रहेका बेला गएको हो । आफ्नो छोराछोरी भेट्न, नाती नातीनीको पास्नी, विहे वा अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न मुलुक पुगेका बेला तीनको मृत्यु भएको छ । दुर्भाग्य नै भनौं तीनले पनि तपाईंले जीतेको निर्वाचनमा भोट र नोट दिएर तपाईंको जीतमा खुशी मनाएका थिए । तर,आपतमा तपाईंले तीनको गुन पनि बिर्सनु भयो ।
तपाईं त्यति विश्वासिलो र गुनिलो नेता त हुँदै होईन किनभने तपाईंले हामी मतदातालाई पटक–पटक धोका दिने गरेकै हो । यो मामिलामा बरु हामी मतदाता विश्वासिलो रह्यौं किनभने पटक–पटक धोका पाएर पनि फेरी तपाईंलाई नै जितायौं । आफ्नै घरमा आगो लगाएर खरानी थुपार्ने अनी त्यै खरानीमा मुला रोपेर अचार खाने तपाईंहरुको प्रवृत्ति पुरानै हो । आफ्नो स्वार्थको लागि पटक–पटक पार्टी विभाजन गर्ने, पार्टी फेर्ने, अर्काको पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्ने र केही नलागे आफैं बिक्न तयार हुने महत्वकांक्षी मान्छे तपाईं नै हो । तर, पनि म आज तपाईंलाई गाली गर्ने मुडमा छैन र गर्दिनँ पनि । किनभने म आज गाली गर्ने अवस्थाबाट एक कदम पछि हट्ने मुडमा छु । तपाईंलाई पनि यही आग्रह गर्दछु की तपाईं आज जुन खेलमा लाग्नुभएको छ प्लिज तपाईं पनि एक कदम पछाडि हटिदिनुस न है ?
एकातिर कोरोना भाइरसको त्रासले हामीलाई घरबाहिर निस्कन दिइरहेको छैन अर्कोतिर तपाईंको गतिविधिले घरभित्रै बस्न दिने देखिँदैन । चीन, भारत, अमेरिका, युरोपका शासकहरु समेत डराइरहेको यो भाइरसबाट तपाईंलाई चाहिँ किन डर नलागेको ? तपाईं मध्य कोही सांसद खोज्दै तराई पुग्ने, कोही मुद्दा दिन प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिल खोज्दै हिँड्ने अनि कोहि बालुवाटार, खुमलटार, भैंसेपाटी, कोटेश्वर पुग्ने के पारा हो यो ? अनि तपाईं मध्यकै कोही कार्यकर्तालाई नारा लगाउन पठाउने, कोही निर्वाचन आयोग दौडाउने अनी कोही टेलिभिजन र युट्युबर खोज्दै हिँड्ने । साँच्चिकै तपाईंहरुलाई कोरोनाले चिनेको छ हो ? कि कोरोनासँगै ‘अनुमति पास’ मागेर तपाईंहरु दौडिरहनु भएको छ ? यदि यस्तो हो भने म पनि तपाईंको मतदाता हुँ त्यसैले मलाई पनि बाहिर डुल्न मन छ, म जस्तै सबै नेपालीलाई निस्कनुछ । एउटा–एउटा पास सबैलाई मिलाइदिनुस्, हामी ३ करोड पनि बाहिर निस्कन्छौं ।
तपाईंहरु मध्य कोही प्रधानमन्त्री नहटाई छाड्दिनँ भन्ने, कोही पार्टी अध्यक्ष नभै छाड्दिनँ भन्ने कोही मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री सम्म पनि छाड्दिनँ भन्ने अनी कोही पार्टी नै फुटाएर पनि मन्त्री, उपसभामुख हुन्छु भन्ने के यो साँचो हो ? तपाईंले मसँग भोट माग्न आउँदा त यो सबै गर्छु भन्नुभएको थिएन । अनि मैले पनि तपाईंलाई यी सबै हर्कत गर्नुहोला भनेर भोट दिएको पनि थिइनँ होईन र ? अनि जे उद्देश्यका लागि मत लिएको हो त्यो मात्र पो गर्नुपर्छ । म जस्ताको मत लिएर जे पायो त्यो गर्दै हिँड्न त भएन नि नेताज्यू । झापाका जनताले देशलाई नै केक जसरी काटेर खाऊ, पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याऊ वा जे मनमा आउँछ त्यै गर भनेर मत दिएका थिए कि ? रौतहटका जनताले गुट मात्रै चलाऊ भनेका थिए कि, अनि चीतवनका जनताले भाँडभैलो मात्रै गर जनताको मतलब नै नगर भनेका थिए ? भक्तपुरका जनताले परेको बेला सांसद लिन महोत्तरी जानुपर्छ भनेका त थिएनन् नि होईन ? या गोरखाका जनताले मुद्दा बोकेर दौड भनेका थिए ? अनि कञ्चनपुरका जनताले त जे भए पनि टुलुटुलु हेर्नु नबोल्नु भनेका थिए हो ? आज नभए पनि कुनैदिन यसको जवाफ दिनुपर्छ नेताज्यू ।
यो महामारीको बेलामा तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अवस्था के छ ? तपाईंको चुनावी सभामा झण्डा बोकेर महिनौं कुद्ने त्यो कार्यकर्ता अनी आफू नखाई नखाई तपाईं र तपाईंका कार्यकर्तालाई खुवाउने ती बृद्ध बुबाआमाले अहिले खान पाएका छन् की छैनन् होला केही बुझ्नुभएको छ ? तपाईंलाई भोट दिन विदेशबाट आएको त्यो भाइ अहिले विदेशमा जागिर पनि छैन, खाना पनि छैन र देश फर्किने अवस्थामा पनि छैन । उसको बारेमा केही सोधिखोजी गर्नुभयो ? अनी मतदातालाई परेको बेलामा मर्‍यो, बाँच्यो, खायो, खाएन नहेर्ने अनि चुनाव आएपछि फेरी जोत्ने मन छ ? यसको हिसाब किताब अब खोजिन्छ नेताज्यू ।
यस्तो महामारीको बेलामा कोरोना भाइरस भन्दा ठूलो राजनीतिक भाइरस ल्याएर हाम्रो मतको अपमान गर्ने तपाईं सबैलाई म र म जस्तै तपाईंका मतदाताको एउटै आग्रह यो छ कि नेताज्यू यो पद, पैसा, कुर्सीका लागि जनमतको अपमान गर्ने बेला होइन । तपाईंहरुमा नैतिकता, इमान्दारिता, विश्वसनियता र जिम्मेवारिता छ भन्ने कुरामा म अझै विश्वस्त छु । त्यसैले मेरो यो विश्वासमा कुठाराघात नहोस् । तपाईंप्रतिको मेरो सम्मानमा ठेस नपुगोस् र तपाईं स्वयंको प्रतिष्ठामा आँच आउन नपाओस् भन्नका लागि मेरो विनम्र आग्रह छ कृपया तपाईंहरु आज जुन आन्तरिक लडाइँको पोजिसनमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट एक कदम पछाडि हटिदिनुस् । तपाईंहरु एक कदम पछाडि हटिदिनुभयो भने देश एक कदम अगाडि बढ्न सक्छ । अन्यथा देशलाई दुर्घट्नामा पार्नुभयो र मलाई र म जस्तै ३ करोड नेपालीलाई अझै रुवाउनुभयो भने तपाईंको हार र पतन निश्चित छ । तपाईं सबैको जय होस् !!!